mars 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 29 mars 2020 7 mai 2020
Alahady 29 Marsa 2020
Alahady fahadimy amin'ny Karemy sy fahatsiarovana ny tolo-panafahana tamin'ny 1947
« Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. » (2 Tantara 7:14)
Manonona hatrany ny fiadanan’ny Tompo ho antsika mpianakavin’ny finoana. Manoloana ny toe-javatra misy eto amin’ny firenena sy ny tsy fisokafan’ny trano fiangonana dia indro atolotra antsika ny tatitra sy ny horonan-tsarin’ny fanompoam-pivavahana notanterahin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy mba ho fiombonantsika sy fampaherezantsika mandrakariva.
Ny hiran’ny Sampana Taninketsa « Mitoetra sy miorina » no hira nanombohana ny fotoana. Rtoa Raharijaona Bodo no nitarika ny fotoana izay natao tamin’ny endriky ny litorjia faharoa. Alahady fahadimy amin’ny Karemy izao sy fahatsiarovana ny tolo-panafahana tamin’ny 1947 ary mbola hibanjinana ny lohahevitra hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao« . Raharijaona Nantenaina sy Raharijaona Valiha no nitari-bavaka sy namaky ny tenin’Andriamanitra ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra.
FIDERANA SY FISAORANA AN'ANDRIAMANITRA
Taorian’ny fiarahabana Apostolika dia ny Salamo 121: 1-2 sy 125:1-2 no novakiana ho fiderana an’Andriamanitra. « Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. Izay matoky an’i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika, fa mitœtra mandrakizay Tahaka ny tendrombohitra manodidina an’i Jerosalema No anodidinan’i Jehovah ny olony Hatramin’izao ka ho mandrakizay » .
Hira Ffpm 164 and. 1 « Jesosy irery ihany »
VAVAKA FIDERANA, FISAORANA ARY FIFONANA
Nanasa hiombona amin’ny vavaka fiderana ny mpitarika avy eo araka izao: « Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina ô , misaotra Anao izahay noho ny fitondranao mahagaga eo amin’ny fiainanay fa na dia tsy afaka miara-mivavaka sy mihaona aty amin’ny Tempolinao Masina aza izahay amin’ity alahady ity dia tsapanay fa manana anjara tsara ao Aminao izahay ny hahafahanay mihombona amin’ny fanompoam-pivavahana amin’ny alalan’izao teknolojia nomenano ny Fiangonanao izao. Midera sy manome voninahitra Anao hatrany izahay Andriamanitra ô, noho ny fahatsaranao sy famindramponao ary izany fiderana izany dia atolotra Anao hatramin’izay ary ho mandrakizay ihany koa. Andriamanitra Rainay Izay any an-danitra ô, manatre izao fanompoam-pivavahana hiombonana izao, fenoy ny Fanahinao Masina ny fotoana tanterahana, satria mahatoky ny Teninao izahay hoe na inona na inona ataonareo dia ataovy amin’ny anarako izany ary raha misy roa na telo mivory amin’ny anarako dia eo afovoany Aho. Dia izany no finoana velona ao anatinay ka na dia tsy aty am-piangonana aza dia mahatoky hatrany fa tafahombona Aminao ka ho voninahitrao ny fotoana tanterahinay toy izao ary ny fifalianao sy ny fiadananao no tanterahinao aminay vahoakanao amin’ny fiainanay manontolo. Mangataka koa ny famindram-po sy famelan-keloka ary ny fanadiovanao anay satria raha tarafina amin’ny sitraponao ny fiainanay, ny nataonay sy izay vitanay dia nihodina izahay, mpanota manoloana ny sitraponao. Kanefa Ianao Tompo ô, dia miantso anay isan’andro isan’andro mba hiverina ao Aminao, fa izay miverina Aminao dia ho raisinao. Ka amin’ny finoana sy ny fanantenana no handraisanay ny famelan-keloka omenao anay noho ny fitiavana sy famindram-ponao noho ny rà nilatsaka tao Kalvaria. Misoatra indrindra Tompo ô noho ny fitiavanao. Amin’ny anaranao Kristy Ilay tia anay no hanaovanay izany vavaka fiderana, fisaorana sy fifonana izany. Amena. »
Raharijaona Nantenaina no nitari-bavaka mialohan’ny famakiana ny Tenin’ny Soratra Masina. Nisaotra izy noho ny fitantanana sy fitahiana ary nanamafy ny fitadiavana fatratra ny ny Tompo satria Izy ihany no afaka hiantorahana. Manana tombon-tsoa hatrany izahay hiaino ny Teninao izay Teny fampanantenana atolotra ny olom-boavonjy sy voafidinao . Nangataka ny famenoaha ny Fanahy Masina ny hamaky sy hitory ny teny sy ny hitehirizana ny fanahin’ireo mihaino hahatakatra tsara ny hafatra avy Aminao ary mba ho tombon-kase ao anatin’ny tsirairay. Ny Teny novakiana dia ny 2 Tantara 30: 1-9, Marka 1: 14-15 ary Asan’ny Apostoly 15:13-21 araka ny perikopa voalahatra amin’ny andro androany.
Hira Ffpm 599 and.1 : « O ry Jesosy mifaly ny foko »
Nampahatsiahy ny Mpitandrina fa alahady faha dimy amin’ny Karemy fifadiana izao, fandinihan-tenan’ny mino ny Tompo miandrandra ny fotoanan’ny Paska. Mbola ao anatin’ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrareo »; hahatsiarovana koa ny tomlom-panafahana nataon’ireo tia tanindrazana fahiny ho amin’ny fahaleovan-tenam-pirenena malagasy, dia ny 29 martsa izany. Mbola ao anatin’ny ady amin’ny valan’aretina « Coronavirus » isika. Ity fanompom-pivavahana ity dia taorian’ ny Lamesa lehibe nataon’ny Papa François « Indulgence », ho an’izao tontolo izao ihany koa.
Ny hafatra dia noraisin’ny Mpitandrina tao amin’ny 2 Tantara 30 :1-9, perikopa izay efa novakiana : antso hiverenana amin’ny Jehovah Andriamanitry ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba.
Efa nizara roa ny fanjakan’ny Israely : ny fanjakana avaratra (Isarely) sy ny fanjakana atsimo (Joda). Rava tanteraka ny Israely, lasan’ny Asyriana. Olom-bitsy sisa no tavela tao an-tanana ka nanoratana taratasy, nanirahan’i Hezekia Mpanjakan’ny Joda, nantsoina hiaraka hanantanteraka ny fankalazana ny andro firavoravoan’ny Paska
Antso fampiraisana ny fankalazana ny Paska tamin’izany fotoana izany
Mampiray ny fanompoam-pivavahana tanterahana amin’Andramanitra tao amin’ny Tempoly tao Jerosalema. Hanantanteraka fanompoam-pivavahana iray miaraka ireo firenena roa efa nisaraka. Ao anatin’io fotoana io no mangataka i Hezekia Mpanjaka ny anolorana ny tànana ho an’i Jehovah Andriamanitra. Izany hoe ny fanompoam-pivavahana atao dia tokony ho masina eo anatrehan’Andriamanitra ary tanterahana amin’ny fahamasinana tanteraka
Fananganana ny efa rava izany antso izany
Ny fihavanan’ireto firenena ireto dia efa rava. Ka rehefa hankalaza ny Paska izy dia fananganana firaisana izay efa rava teo aloha izany. Io fananganana ny efa rava io no aseho amin’ny Teny hoe : « Hiala aminareo ny fahatezerana mirehitra » 2 Tantara 30:8. Tezitra tamin’ny fanjakan’ny Israely i Jehovah noho izy nanao ny tsy mety sady tsy marina, ary nanompo sampy ka hiala aminy izany fahatezerana izany.
Raha mandinika ny bokin’ny Asan’ny apostoly 15 :13-21 dia fintinina hoe : ny fahasoavan’i Jesoa Kristy irery ihany no hahazoam-pamonjena, na ho an’ny Jiosy na ho an’ny Jentilisa.
Ny karemy na fifadiana dia fotoana hieritreretana sy handinian-tena ary hanetrehan-tena hiatrika ny Paska izay firaisana masina ao amin’Andriamanitra. Ny 29 martsa dia fahatsiarovana ireo mahery fo niady sy nitady fahaleovantenam-pirenena tamin’ny mpanjana-tany ary nanao sorona ny tenany mihitsy ho maritiora tamin’izany tolom-panafahana izany. Izany dia misintona ny saintsika satria ao anatin’ny ady tanteraka isika izao, ady amin’na areti-mandoza fa tsy ady amin’ny nofo aman-drà na amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra. Tsara ny hatsiarovantsika fa ny firaisantsika fo, saina, fanahy, ny mametraka eo ampelatanan’Andriamanitra ny mombantsika rehetra, no hivoahantsika ho mpandresy amin’ny lafiny rehetra. Ny fandresen’i Jesoa Kristy no fandresen’izay rehetra mino Azy .
Antso fibebahana hiverina amin’Andriamanitra
Hahazoana famindram-po amin’Andriamanitra : ny tantara no manambara fa na ireo lasa babo aza dia hiverina any amin’ny taniny
Mba hahazo ny fiantran’Andriamanitra: tsy hiamboho azy intsony Andriamanitra noho ny fibebahany sy ny fiverenany
Izany ny toriteny nataon’i Jesoa rehefa avy nandresy ny fakampanahy nataon’i satana Izy. Nitory ny fanjakan’Andriamanitra ary nanambara ny amin’ny fibebahana satria azo fintinina ny Marka 1:14-15 hoe : izay mibebaka sy mino ny Filazantsara no mendrika miditra any amin’ny fanjakan’Andriamanitra
Nanenika izao tontolo izao ny aretina « Coronavirus ». Tsy nisy izay tsy nitaintaina sy nihorohoro ary na mbola vitsitsy ihany aza ny eto Madagasikara dia tena mihorohoro sady matahotra isika. Ao anatin’izany no naha tery am-po, tery am-panahy ny Papa hanao lamesa lehibe hanolorana « indulgence » ho an’izao tontolo izao, izany hoe famelankeloka atolotra ho an’ny olona mitady ny famindrampon’Andriamanitra. Nanao izany ny Papa mba hanafaka ny valan’aretina sy hanasitrana ireo marary.
Ny ady ataontsika amin’ity « Coronavirus » ity dia ady iraisana hina mihitsy, izay vao tanteraka. Fitsapana ny finoantsika, fitsapana ny firaisantsika, fitsapana raha matoky an’Andriamanitra isika, fitsapana raha miazona ny finoana isika na mandao ny finoana.
Eto amin’ity fitandremana Amparibe Famonjena ity dia tsarovy fa na tsy afaka mamonjy fanompoam-pivavahana iombonana aty am-piangonana aza isika dia afaka miara-mivavaka amin’ny fanarahana fotoana tahak’izao, hafahana mbola mamelona hatrany ny finoana, mba azahoantsika mifikitra tsara amin’ny fanantenana izay efa nananantsika tao amin’i Kristy, mba hafahantsika mamelona ilay firaisankina sy fiombonana ao amin’i Kristy. Ny fanantenantsika dia ny manana firaisana ao amin’i Kristy dia ny handovantsika ny fiainana mandrakizay ary ny fandresen’i Kristy entintsika mandresy ny fahavalo rehetra ka na ity corovirus ity aza dia azontsika resena amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana ataontsika isan-tokatrano ka izany indrindra no anaovana fanompoam-pivavahana toa izao
Izao ary ny hafatra mba hafahana mandresy sy maharitra miaraka amin’ny Tompo :
mivavaha mafy, io no hery entintsika mijoro mandrakariva
tano tsara ny finoana, io no entintsika mandresy ny fahavalo rehetra
matokia an’Andriamanitra, io no ananana anjara ao amina’Andriamanitra ka ananana ny famindrapony sy ny fiantrany
hendre tsara tahaka ny menarana, morà tahaka ny voromailala satria izany no hahazoana mandeha amin’ny làlana marina sy mahitsy
Ry Amparibe Famonjena maharitra amin’ny finoana, mifankatia ary miasa am fahazotoana !
Raha miverina amin’Andriamanitra isika dia ho tanteraka ny firaisantsika ao amin’ny Tompo sy amin’ny samy isika kristiana ka ho tonga fibebahana marina ; ary ho tonga amintsika tokoa ny valimbavaka.
« raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. » (2 Tantara 7:14)
Tao amin’izany vavaka izany no niantorahany amin’Andriamanitra mora fanahy, miantra sy mamela heloka. Nivaka izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory ny Filazantsara, ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena n’aiza n’aiza misy azy, ny kristiana rehetra ao anatin’ny sahan’ny Fjkm sy ny mpino rehetra nanerana an’i Madagasikara sy izao tontolo izao. Aoka hanana ny fandresena amin’ny finoana nono ny fanantenana ao amin’i Kristy manaiky ny fitarihana rehetra omen’ny mpitondra fanjakana sy ny mana-pahaizana mba ho tonga velona tra-pamonjena amin’ity ady atao amin’ity aretin-dratsy mandripaka manerana ny tany ity. Nentiny am-bavaka na ny tsy kristiana aza satria olombelona koa ireny. Nivavaka izy amin’ny fiomanana ny fankalazana ny Paska izay apetraka tanteraka eo am-pelatan’ny Tompo satria tebitebinay, hoy izy, ny fahateran’izao fihobohana izao. Ny faniriana dia ny hiaraka hahatanteraka ao anatin’ny Fiangonana ny fankalazana Anao amin’izany fotoana izany, izay voka-dehibe hiatrehan’ny Fiangonana ny fiainany sy ny adidy hijoroany vavolombelona.
Nivavaka izy mba hiatra amin’ny olona rehetra ny lamesa lehibe izay nataon’ny Papa François ho famelan-keloka ho an’izao tontolo izao. Nentiny am-bavaka ireo manana olana amin’ny fiainana, ireo marary, ny mana-manjo, ny tratran’ny tsindry hazo lena, ny tranan’ny tsy fidiny, .Nivavaka izy ho an’ireo manana hataka manokana; Nivaka koa izy mba hiverina amin’ny heriny ny Fiangonana rehetra hatanjaka tsara amin’ny finoana sy ny fanantenana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany. Amena.
Rtoa Raharijaona no nanohy ny fotoana, taorian’ny nandrenesana ny Tenin’Andriamanitra, tamin’ny fanasana amin’ny fiombonana amin’ny alalan’ ny fanekem-pinoana laharana voalohany mba ho fanamafisana ny finoana sy ho fijoroana vavolombelona eo anatrehan’izao tontolo izao.
Fiombonana ao anatin’ny ranom-bavaka no nataon-dRamatoa Raharijaona mba hahatonga haharitra sy hajoro tsara ami’ny finoana manolona ny valan’aretina mandringana ny firenena izao. Efa nifandefa hafatra isika tamin’ny alalan’ny Soratra Masina tamin’ny sms, tamin’ny feo sy ny sary tany amin’isan-tokantrano hiaintsika hatrany ny tondronzotrantsika hoe ny fiasan’ny vavaky ny marina dia mahery indrindra.
Ny Soratra masina natolotra ao anatin’izao ranom-bavaka izao dia ny Teny ao amin’ny Habakoka 3/17-19a « Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, Ary tsy misy voany ny voaloboka, Na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, Ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, Na dia vonoina aza ny ondry ao amin’ny vala, Ary tsy misy omby ao am-pahitra, Nefa izaho dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany sy hiravoravo amin’Andriamanitry ny famonjena ahy. Jehovah Tompo no tanjako »
Nivavaka izy avy eo nitondra eo am-pelatanan’Andriamanitra ny hetaheta, ny faniriana, ny enta-mavesatra satria ao Aminao, hoy izy, ny fiainanay. Nivavaka izy ho an’ny vahoaka malagasy rehetra, ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, ny hiarovan’Andriamanitra amin’ity aretin-mandoza Corona virus ity, ka ny Fanahinao Masina, hoy izy, no ho fefy manodidina anay ka tsy hahakasika anay io aretina io, ho marina aminay ny teninao hoe Ianao no hanafaka anay amin’ny areti-mandoza ary ao ambany elatrao no fialofanay . Ataovy mahatoky Anao izahay , hoy izy, ampitomboy ny finoanay, ataovy mahajoro manana Anao Andriamanitra ka ny Teninao no ataovy antoky ny fandresenay sy fahombiazanay. Ataovy toy ny zava-mandalo ny tebiteby, ny tahotra sy ahiahy isan-karazany fa aoka hifantoka amin’ny teninao hoe mijere an’i Jehovah Andriamanitrao dia ho voavonjy ianao tahaka ny zanak’Israely fahiny izay azon’ny aretina ka voavonjy sy sitrana raha nivavaka taminao. Izany vavaka izany dia tononina ho an’ny mpiara-mivavaka eto Amparibe famonjena, ho an’ny malagasy manontolo, ary tsaroanay manokana, hoy izy, ny zanaka, mpiray tanindrazana aminay any am-pitan-dranomasina any, izay any amin’ny toerana mahamay sy sarotra amin’ity aretina ity. Henoy ny fitalahoanay, valio ny vavakay satria Ianao no mahay sy mahefa ny zavatra rehetra. Amin’ny anaran’i jesoa Kristy Mpamonjy sy Mpanotra no angatahina izany vavaka izany. Amena.
Hiran’ny Finoana faha-12 :« Feno toky ny Fanahy »
VAVAKA NATAON'NY MPITANDRINA
Nanohy ny vavaka ny Mpitandrina nisaotra an’Andriamanitra tia, tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Isaoranay ianao, hoy izy, satria Andriamanitra mihaino vavaka ary inoanay fa mamaly araka ny haben’ny indrafonao, Ianao Ilay Andriamanitra mahasitrana ny aretina rehetra. Nivavaka izy ho an’ny mpitondra fanjakana eto amin’ity Nosy ity, manomboka amin’ny filoham-pirenena, ny mpiara-miasa aminy akaiky, hatrany amin’ny fokontany, ny hanomezana azy fahendrena, fanahy matahotra Anao mandrakariva, mahatoky Anao ary tsy kivy manoloana ny zavatra misy mihatra eto amin’ny firenena izao. Aoka, hoy izy, hahay hanaiky ireny mpitondra anay ireny izahay vahoaka. Nivavaka izy ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana mandray andraikitra ankehitriny, ampio izy ary omeo azy ny fandavan-tena hahatanterahany ny asany fitsaboana sy fikarakarana ny amin’ny fahasalamana.
Nentiny am-bavaka ireo mpitandro ny filaminana manantanteraka ny fandaminana rehetra hanana fahendrena mandamina sy mandrindra. Nivavaka izy ho an’rieo efa voan’izao aretina izao mba ho resy sy ho lao izany valan’aretina izany ka hiverina amin’ny fahasalamana ireo marary, mba tsy ho ela dia ho resy izao valan’aretina izao mba hiverenana amin’ny fiainana taloha, indrindra eo amin’ny fanompoana Anao eo anivon’ny Fiangonana. Ianao Andriamanitra ô hitsinjo ny Malagasy rehetra, hoy izy, ary hampahafantatra anay fa Anao Kristy i Madagasikara ary Ianao Kristy dia an’ny Malagasy rehetra. Nangatahina amin’ny anaran’i Jesoa izany vavaka izany. Amena.
Hira Ffpm 355: 1 « Ry namako mahantra, Manaram-po izao »
Notononina ny tondrozaotra taorian’izay ary natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy ny Trinité masina izany.
Nitarika ny fotoana sy asa vavolombelona: Ramatoa RAHARIJAONA Bodo
Vavaka mialoha ny vakiteny sy namaky ny Testamenta taloha : Raharijaona Nantenaina
Vakiteny Testamenta vaovao: Raharijaona Valiha
Nitoriteny sy vavaka fangatahana: Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
Naka sy nandrindra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova sy Raharijaona Nirina
Nandray an-tsoratra Rajaofetra Voahangy sy Seta. Naka ny sary :Rajaofetra Seta
Alahady 22 Marsa 2020
Alahadim-bokatry ny Sampana Taninketsa
"Miverena amin'ny Tompo Andriamanitrao"
« ary aoka isika hihinana sy hifaly;fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray.» (Lioka 15:23-24)
Manoloana ny toe-java misy lalovan’ny firenentsika noho ny fisian’ny trangan’aretina CORONA VIRUS, dia nivory ny Biraon’ny Fiangonana notarihan’ny Ray aman-dreny Mpitandrina ny Zoma 20 Martsa sy ny Sabotsy 21 Martsa ka nanapaka hevitra mba ho fisorohana ny mety hiparitahan’ny valan’aretina amintsika mpianakavin’ny finoana sy amin’ny manodidina antsika dia nahato aloha ny fanompoam-pivavahana ny Alahady 22 Martsa , mandra-pisian’ny fandaminana vaovao. Fanompoam-pivavahana voafintina atolotry ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady izao atolotra antsika izao. Azontsika vakiana eto ambany izany ary azontsika atao koa ny mijery ny vidéo na eto amin’ity pejy ity na ao amin’ny Facebook’ny Mpiangona @ FJKM Amparibe Famonjena.
Alahady fahaefatra amin’ny karemy izao alahady izao ary mbola hiombonantsika amin’ny lohahevitra hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao » sy hitondrana am-bavaka ny asa fifandraisana eto amin’ny sahan’ny FJKM. Eto amin’ny fitandremantsika kosa dia alahady ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa. Ny Litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina ary Rtoa Raharijaona Bodo no nitarika ny fanompoam-pivavahana.
Ny Salamo 27:1-3 sy ny Salamo 28:7 no novakiana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra « Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako? Raha manatona ahy hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafintohina ka lavo. Na dia misy antokony mitoby hiady amiko aza, tsy hatahotra ny foko; na dia misy ady mihatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. » sy ny Salamo 28:7 « Jehovah no heriko sy ampingako; izy no nitokian’ny foko, ka voavonjy aho; dia mifaly ny foko, ka ny hirako no hiderako Azy. »
Niombona tamin’ny vavaka fisaorana sy fiderana taorian’izay, araka izao manaraka izao : « »Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina o , isaoranay Ianao , isaoranay ny anaranao fa akaiky anay Ianao ka azonay antsoina amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra. Misaotra Anao izahay, midera sy manome voninahitra Anao, mankasitraka Anao noho izao tombon’andro-pahasoavana atolotrao anay izao. Fantarao loatra ary tsy miafina Aminao ny zava-misy eto amin’ity firenena ity . Tsy afaka tonga aty am-piangonana ny vahoakanao mihombona aty noho ity areti-mandoza mandalo eto amin’ny firenena ity. Kanefa isaoranay Ianao noho ny teknolojia nahafahanay nihaona sy nifampizara toy izao . Isaoranay Ianao fa manana anjara eo Aminao izahay miara-mivavaka, manana anjara izahay mihaino ny Soratra Masina, mandre ny toriteny sy ny fampianarana. Fanomezan-tsarobidy izany Andriamanitra ô ka isaoranay Anao fa fahasoavana atolotrao manokana ho an’ny zanakao. Izao fanompoam-pivavahana iombonanay izao dia inoanay sy antenainay fa atrehanao, hamasininao, satria Ianao Andriamanitry ny hery sy fahefana rehetra, mahay ny zavatra rehetra Ianao ka fantatray fa masina eo anatrehanao ny fotoana tanterahanay. Hanam-pifaliana izahay mihombona amin’ny alalan’izao fanompoam-pivavahana izao. Kanefa Jesoa Tomponay ô, manoloana ny fahatsaranao sy izany famindram-ponao sy ny fahasoavanao izay hihainanay sy hivelomanay isan’andro isan’andro izany dia mahatsiaro indrindra fa tsy mendrika eo anatrehanao, mpanota manoloana ny sitraponao raha tarafina amin’ny Teninao ny fiainanay dia maloto izahay Tompo ô. Ka indreto izahay zanakao manetry tena eo anatrehanao, mifona sy mibebaka, mamelà ny helokay Tompo ô , mamindra fo aminay, sasao madio izahay mba ho afa-pahotana, fafao tsy ho eo anatrehanao izay rehetra fahalotoana rehetra fa ataovy marina eo anatrehanay ilay hoe Andriamanitra mahari-po sy mora fanahy Ianao tsy nitahiry fahatezarana mandrakizay, tsy manda-teny amin’ny zanakao ka na dia maditra sy miodina aza izahay rehefa antsoinao ka miverina eo anatrehanao dia raisinao amin’ny fifaliana. Ka dia izany no isaoranay Anao Tompo ary dia raisinay amin’ny fifaliana ny famelan-keloka sy ny teny mamy omenao ny zanakao manao hoe : voavela ny helokao. Misaotra Andriamanitra Tomponay ô ! Misaotra indrindra fa tia anay Ianao. Dia amin’ny anaranao Jesoa Kristy Ilay Tompo sy Mpamonjy anay no hanaovanay ny vavakay. Amena. « »
Ny teny nandraisan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny hafatra izao alahady izao dia ny ao amin’ny Perikopa Fjkm ka ny Lioka 15:11-24. Ao anatin’ny fanoharana telo io hafatra io izay nataon’i Jesoa Kristy tamin’ny vahoaka maro karazana. Tao ny mpamory hetra, ny mpanota, ny olona maro samihafa, ny fariseo sy mpanora-dalàna. Ny fanoharana voalohany dia ny amin’ny ondry zato. Nisy very ny iray tamin’ireo ary natao izay nahita azy. Ny fanoharana faharoa dia mahakasika ny farantsa kely folo ka very ny iray ka natao koa izay nahitana azy. Ny fahatelo dia ny amin’ilay zanaka adala.
Anio dia fotoana natokan’ny Fjkm hitondrana am-bavaka ny asa fifandraisana na ny Afifab. Anio dia karemy fahaefatra, fotoana handinihantena mialoha ny hankalazana ny fetin’ny Paska. Eto amin’ny fitandremana dia alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Sampana Taninketsa.
Ny hafatra raisintsika dia ao anatin’ny fampianarana sy fanoharana nataon’i Jesoa Kristy izao ny amin’ilay zanaka adala mbola hampifantoka antsika amin’ny lohahevitra banjinina mandritra izao volana martsa izao dia ny hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao ».
Manomboka eo amin’ny andininy faha 17 ka hatramin’ny faha 21 no tantara misy ny tena handraisantsika ny hafatra. Handeha isika handray tena ka tahaka ny zanak’adala avokoa eo anatrehan’Andriamanitra : olona efa nania, nanao ny tsy nety, mpanota kanefa manana finoana sy fanantenana fa rehefa mitodika sy miverina amin’Andriamanitra dia raisiny . Ahoana ary no fomba hiverenantsika Aminy ?
Ny fiverenana amin'ny Tompo dia fiovam-penitra mahery vaika.
Io fanoharana amin’ny zanak’adala io no lesona iray. (and.17 sy ny manaraka). Zavatra roa no nasehony rehefa nody ny sainy dia ny fanenenana fatratra ary ny fanapahan-kevitra entitra teo amin’ny fiainany.
Teo amin’ny fiainana Jiosy dia misy ny mpirahalahy azo lazaina fa hanana anjara lova ka ny lahy matoa dia omena lanja satria mandray ny roa am-pahatelon’ny lova satria manana adidy hiahy ny reniny raha tsy eo intsony ny rainy sy ny anabaviny amin’ny fotoan-tsarotra. Ny fandovana mbola velona dia azo natao tokoa teo amin’ny Jiosy ka afaka mihary avy hatrany ny harena ka rehefa osa ny raiamandreniny dia io zanany io no manampy sy manarina izany fahavoazana izany. Ny faralahy kosa dia mampiasa araka izay tiany ny iray ampahatelony izay noraisiny. Fa tsy araka izany no niseho fa nandany ny iray ampahatelony izy dia nitsitongana tanteraka ny fiainany iray manontolo ka niafara niaraka tamin’ny kisoa ka toy ny fiainan’ny olona efa maty ny azy. Rehefa nody ny sainy dia niverina tany amin’ny rainy, toy ny fitsanganana tamin’ny maty.
Ao amin’ny Isaia 31:4-6, izay ao anatin’ny Perikopa anio koa, dia milaza ny Andriamanitra miantra ny olona izay miverina Aminy. Ao ny miteny hoe raha tsy mibebaka , raha tsy miova, dia loza no mihatra amin’ ity firenena Israely ity. Raha tsy mitandrina izany ity firenena ity dia ho tahaka ilay zazalahy niara-niosina tamin’ny kisoa, toy ny fiainan’ny olona efa maty. Tsy niverina nefa ity firenena ity hany ka lasa babo tany Babylona.
Ny fiverenana amin'ny Tompo dia fibebahana mafy ary marina
Ny fiverenana amin’ny Tompo dia fibebahana mafy ary marina atao amin’ny fo torotoro sy fanahy mangorakoraka ary amin’ny fitalahona mahonena tokoa no anatontosana izany. Raha jerena ny fiainan’ity zazalahy ity dia tena latsaka ambany ny fiainana misy azy fa miosona miaraka amin’ny kisoa ; toy ny olona efa maty nefa nanatona an’Andriamanitra Izay manome sy tompon’ny fahavelomana izy. Nibebaka tamin’ny fo torotoro sy fanahy mangorakoraka ary tamin’ny fitalahona izy. Nifona,nibebaka mafy, naneho fanetretena teo amin’ny rainy izy. Efa tsy mendrika ny natao hoe zanaka intsony izy noho ny nataony : nandany ny lovany tamin’ny filan-dratsy, tsy nitsinjo ny ho avy raha toa misy fahosana mety mahazo ny rainy, nefa nandray azy am-pifaliana sy tao anatin’ny faharetana ny rainy ka nitsinjo azy hatrany satria zanany io, tsy foiny. Nahatsiaro koa ny zanany fa rainy io ka izany no niverenany nody.
Ny nambaran’ny Apostoly Paoly dia ny fizahan-toetra amin’ny afo, izay nanao asa tsara dia tsy levon’ny afo fa migoka ny hatsaran’ny asa nataony. Ny zanaka na adala aza dia ho vonjena ihany satria zanaka. Isan’ireo ondry zato izy ka namelana ny sivy amin’ny sivifolo hitadiavana azy. Izany no fanantenantsika amin’ny maha-zanak’Andriamanitra antsika : antenaintsika ny handraisany antsika. Raha manana faniriana isika dia aoka hitafy ny fanetrehan-tena, fibebahana mafy sy marina atao amin’ny fo torotoro sy fanahy mangorakoraka ary amin’ny fitalahona mahonena, hivavaka isan’andro ka ho raisin’ny Tompo toy ny nandraisan’ny rainy ity zanaka adala ity. Nanaovana fety lehibe ny nadraisana azy
Fotoam-bokatry ny Taninketsa androany fa tsy fahaizana mihira fotsiny fa fanabeazana ny zava-dehibe amin’ny finoana sy ny fiainana maha-kristiana. Ny hafatra ho anareo dia ny hira ataonareo dia ataovy fiainanareo satria zanak’Andriamanitra mihira ny fiderana Azy. Mitodika amin’ny olon-dehibe koa, mba Taninketsa mpitory ianareo.
Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amena.
Nivavaka ny Mpitandrina taorian’izay nisaotra noho ny amin’ny Teny sy ny hafatra norenesina. Nampianarina fa ny fiverenana amin’ny Tompo dia fiovam-penitra mahery vaika eo amin’ny fiainana sy ny fanenenana fatratra sy fanapahan-kevitra entitra. Aza avela ho variana fa ataovy mahatsiaro fa ny fiainanay dia toy ny an’ilay zanaka adala izay natao fanoharana mba ho lesona ho anay. Nivavaka izy ho an’ny kristiana rehetra manerana ny sahan’ny Fjkm, ho an’ny Malagasy rehetra mba hitodika hiverina Aminao. Nentiny am-bavaka ho amin’ny asa fanompoana rehetra tanterahina, ho an’ny Taninketsa, ho an’ny mpitory Filazantsara, ny mpitondra Fiangonana, ho an’ny mpanompo ao anatin’ny tsy fahasalamana, mana-manjo, tsy fahasalamana, ny voan’ny tsindry hazo lena, ny Afifab hahatanteraka ny fanaparihahana ny vaovao. Nivavaka amin’ny alahady karemy hiomana tena sy fanahy hiatrika ny fotoanan’ny Paska. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
VAVAKA 1 :
Rtoa Raharijaona Bodo no nanohy ny fotoana tamin’ny vavaka ho an’ny malagasy manontolo na koa ny vahiny mba tsy ho tratran’ny aretina mandoza corona virus. Mivavaka ho an’ny mpitondra fanjakana tsy ankanavaka, mba omeo azy ireo ny fahendrena tsara sy ny Fanahinao Masina, hahavita tsara ny andraikiny fiarovana ny ain’ny malagasy iray manontolo. Mivavaka ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana, hamafiso aminy ny fahaizana amam-pahalala mba hahaizany ny fitsaboana tokony hatolotra ny Malagasy. Henoy ny vavakay, mamalia ny vavakay fa Andriamanitra tia ny Malagasy Ianao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Ilay tompon’ny finoana no nanaovana ny vavaka.Amena.
Mbola notohizan’ny Mpitandrina Raharijaona ny vavaka tamin’ny fitalahoana ny amin’ireo olona efa voan’izany aretina corona virus izany, misy amin’ireny hoy izy Mpitandrina mitondra Fiangonana , notrotroina am-bavaka izany, mba hiasa hanan-kery ny Fanahy Masina ka hamotika izany aretina izany. Nivavaka izy ho an’ny mpitondra Fiangonana rehetra omena fahendrena, apetraka feno eo am-pelatananao. Amena
TENY FISAORANA ARY FAMARANANA NY FOTOANA
Taorian’izay dia nisaotra ny Mpitandrina noho ny fahatanterahan’ny fotoana sy nisaotra noho ny fandaminana ary nirary soa ho samy ho velona avokoa, ho tra-pamonjena ho tahian’Andriamanitra isika rehetra. Tsara manaraka ny dinidinika alefa amin’ny haino aman-jery isika ary hanaiky ireny fandaminana ireny.
Notononina ny tondrozotra ary natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano.
Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra,
Nandray feo sy naka vidéo : Raharijaona Nirina – Nandray an-tsoratra : Seta Rajaofetra.
Publié le 15 mars 2020 7 mai 2020
Alahady 15 Marsa 2020
Alahadin'ny Sampan'Asa momba ny Fampandrosoana - SAF/FJKM.
Alahady nanaovan'ireo Mpiandraikitra Mpanazava sy Tily fanekena sy fanolorana ireo Tonia vaovao.
« Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'i Jehovah Andriamanitrareo» (Joela 2:13a)
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny fotoana ary ny Misionera Joharivelo Fanambinana, manatontosa ny asa misionera any amin’ny Kaominina Bevoay amin’ny anaran’ny Fiangonana Amparibe Famonjena, no nitory ny tenin’Andriamanitra. Ny Joela 2,12-17 no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny.Ny Diakona Rakotonarivo Claudia sy Rakotonarivo Herinirina ao amin’ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona no nivavaka sy namaky ny Tenin’Andriamanitra. Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana. Nisy 905 ny mpianakavin’ny finoana niara-nihombom-bavaka androany.
Niarahana namaky ny Salamo 90,1-6 « Tompo ô, efa fonenanay hatramin’ny taranaka rehetra Hianao. Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra, Na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, Dia Andriamanitra Hianao hatramin’ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin’ny vovoka Hianao ka manao hœ: Miverena, ry zanak’olombelona. Fa eo imasonao ny arivo taona dia toy ny fandalon’ny omaly, Ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin’ny alina. Manindao azy tahaka ny riaka Hianao torimaso izy; Amin’ny maraina tahaka ny ahitra mora miova izy. Amin’ny maraina mamony izy, nefa mora miova; Amin’ny hariva voajinja izy ka maina. » Taorian’ny famakiana ny Salamo dia nohiraina ny FFPM 31: « Misaotra Anao izahay ry Ray «
Nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany ka nanomezany ny Zanany lahy tokana ho famonjena antsika sy ny fanomezany antsika ny Fanahy Masina izay mbola mampijoro ny fiangonana. Nisaorana ny Tompo noho ny fitantanany. Noho ny fahotana vita dia nangatahina ny famelan-keloka. Nangatahina ihany koa ny fanatrehan’ny Tompo hanamasina ny fotoam-pivavahana.
Rajaofetra Chantal no nanatanteraka izany ary ny Salamo 119: 18 no nangalana ny hafatra. Fampitahana ny journal intime sy ny Baiboly no nentina nampiditra ny resaka. Ny journal intime dia boky mirakitra ny tsiambaratelon’ny olona iray izay izy tenany ihany no manoratra azy.
Ny Baiboly kosa dia tsiambaratelon’Andriamanitra amintsika zanany. Andriamanitra mihitsy no nanoratra ny Baiboly tamin’ny alalan’ireo mpanompony. Ireto misy santionany amin’izany tsiambaratelo izany: Kolosiana, 3,21; Tononkiran’I Solomona 8,4; Kolosiana 3,18; Kolosiana 3:20
Taorian’izay hafatra fohy izay dia nohiraina ny FFPM 549,2 « Ny tsiron’ny fiainana« . Tao amin’ny vavaka nataony no nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany sy ny fampianarana natolony. Nangatahina ny Tompo mba ho voatahiry tsara any anatin’ny tsirairay ny hafatra.
Ny Diakona Rakotonarivo Herinirina no nanao ny vavaka nisaorana ny Tompo noho ny teny izay atolony antsika, nangatahina Izy ampitoetra tsara ny Teny aty am-pon’ny tsirairay ka ho tonga mpihaino mpakato ny mpanompon’Andriamanitra. Nangatahina ny Fanahy Masina hiasa any anatin’ny mpitondra ny hafatry ny Tompo. Ny Diakona Rakotonarivo Claudia no namaky ny teny ka ny Perikopa androany dia ny Joela 2,12-17, Matio 12, 38-42, Asan’ny Apostoly 11,19-20.
Taorian’ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 409,1-3 « Ry zaza mpiodina mba miverena »
Ny Misionera Joharivelo Fanambinana manatontosa ny asa misionera any amin’ny Kaominina Bevoay no nitory ny Tenin’Andriamanitra.Natomboka tamin’ny fampahafantarany ny tenany sy ny ankohonany ny toriteny.
Taorian’izay dia nampahafantatra ny fiangonana ny toeram-piasana izay iadidiany izy.Nambarany tamin’izany fa any amin’ny fokontany Maharenina sy Androangabe no iasany, izay ao amin’ny Kaominina Bevoay. Raha handeha any dia ny lalam-pirenena fahafito no arahina ka eo amin’ny tampon’Ihorombe no mivily mihazo an’I Faradofa. Eo indray no mandeha mihazo ny lalana manaraka an’I Ranomafana ary 17 Km miala eo dia tonga ao Bevoay.
Rehefa vita ny fampahafantarana ny tanàna dia niroso tamin’ny fampisehoana ireo karazan’olana sedraina amin’ny asa fanompoana ny Mpitandrina. Ny olana lehibe izay sedrain’ity lehilahin’Andriamanitra dia ny fanjakan’ny fanompoan-tsampy. Mbola mitazona ny fivavahan-drazana ny ankamaroan’ireo mponina. Mpimasy avokoa ny ankamaroan’ny raim-pianakaviana eo an-tanàna. Vitsy ny mpivavaka. Na ireo miditra any an-tranon’Andriamanitra aza ny olona dia tsy mbola mahafoy ny fomban-drazana. Efa nisy fiangonana Katolika teo an-toerana saingy ringana izany noho ny fihetsika tsy mendrika nataon’ny olona teo an-tanàna. Nisy fotoana ny Misionera ankehitriny nandefasan’ireo mpimasy maingoka. Ny sakafo omen’ny manodidina azy dia sakafo avy nanaovana ny fomban-drazana. Amin’ny maha maodely azy amin’ny fomba fiainana araka ny sitrapon’Andriamanitra dia sady tsy mihinana izany ny tenany sady mananatra ireo mpiara-monina ny fomba tokony hatao raha hanaraka ny Tompo. Rehefa nahazo ny hanatra ny manodidina dia niova ihany ny fomba fiainany.
Teo am-pamaranana ny toriteny dia nanao fijoroana vavolombelona ny Mpitandrina. Nisy lehilahy iray nanan-janaka marary efa teo am-bavahaonan’ny fahafatesana. Nanatona ny Misionera izy ary niangavy azy mba handeha any an-tranony hitondra am-bavaka ny zanany izay marary. Tsy nandeha anefa ity mpanompon’Andriamanitra ity satria tsy naheno ny Tompo nibitsika nanoro hevitra taminy. Rehefa tonga tany an-trano ity mpanompon’Andriamanitra ity dia naheno ny bitsik’Andriamanitra. Naniraka azy handeha hamonjy ilay zaza marary Andriamanitra.Nambaran’Andriamanitra aza fa Izy tenany no naniraka ilay rain-jaza hangataka famonjena amin’ity Misionera ity. Nandeha tany amin’ilay zaza marary ny Mpitandrina, nojerena, feno olona ny trano, nisy mpimasy ihany koa tao an-trano. Nivavaka ny Misionera, rehefa vita ny vavaky ny mpanompon’Andriamanitra dia nitsangana ihany koa ilay mpimasy mba hanao ny anjara tandrify azy saingy noraran’ny tompo-trano. Akory ny hagagan’ny iray trano fa sitrana ilay zaza. Nanomboka teo dia nitombo isa ireo olona namonjy ny trano fivavahana amin’Andriamanitra.
Taorian’izay fijiroana vavolombelona izay dia nanambara tamin’ny mpianakavin’ny finoana ity Misionera ity fa manana andraikitra amin’ny fiangonana any Bevoay ny mpanompon’Andriamanitra eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjena.
Taorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny STK.
Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarany ary nisaorana ny Tompo noho ny fanomezany ity lehilahin’Andriamanitra ity misolo tena ny fitandremana any Bevoay.Nangatahina ny Tompo hanohana ny mpanompony hampisy fahazavana be any amin’ity faritra anjakan’ny fanompoan-tsampy ity. Nangatahina ihany koa ny Tompo hijery manokana ny fianakavian’ity mpanompony ity.
Nangatahina ny Tompo mba hampody indray ireo zanak’Andriamanitra miverin’dalana.
Ho fanehoana amin’Andriamanitra ny finoana dia niaraha-nanonona ny fanekem-pinoana fahatelo.
Ny mpitantsoratry ny Fiangonana Rakomanana Andry no nanolotra izany. Ireto avy no nisongadina tamin’izany:
Ho fanohanana ireo mpiomana ho Mpitandrina taona faharoa dia hisy rindran-kira karakarain’izy ireo anio ao amin’ny FJKM Andrainarivo hiarahana amin’ny Laurent Rakotomamonjy.
Noho ny faha 25 taonan’ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana dia ho tontosaina ny 27 Martsa izao ny fanompoam-pivavahana fanokafana izany taon-jobily izany ao amin’ny FJKM Rasalama Maritiora manomboka amin’ny 9ora sy sasany.
Ny FJKM Ambohipiara Ziona dia fiangonana miara-mandroso amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Noho ny fankalazany ny Jobily faha-50 taonany dia manasa antsika izy ireo hiaraka mivavaka aminy ny 29 Martsa amin’ny 9 ora.
Ny STK Ivandry dia mikarakara fifaninanana ara-panatanjahatena Basket ball sy foot-ball koa manasa antsika izy ireo handray anjara amin’izany.
Ho tontosaina ao amin’ny Le Pavé ny 21 Martsa izao amin’ny 8ora sy sasany ny Forum Economique Chrétienne ; Mr ANDRIAMPARANY Ricky izay mpianakavin’ny Tompo eto Amparibe Famonjena no mikarakara izany ka dia manasa antsika izy handray anjara amin’izany.
Nambara ny fiangonana ny toetry ny vola
Nampatsiahivina ny Mpandray ny fanasan’ny Tompo fa hisy ny Ankatoky ny fandraisana amin’ny heriny anio.
Nampahafantarina ny vahoakan’Andriamanitra ireo fandaharam-potoana mandritry ny herinandro
Novakiana ihany koa ireo taratasy avy amin’ireo Sampana sy sampan’asa ary Vaomiera.
Amin’ity herinandro ho avy ity ny erinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa. Araka izany dia hisy ny famelabelaran-kevitra ny alatsinainy ho avy izao amin’ny enina ora latsaka fahefany. Ny Alarobia kosa amin’ny 12 ora atoandro dia hisy ny fampianarana Soratra Masina. Ny Zoma hariva tahaka ny mahazatra dia hisy fanompoam-pivavahana andraisan’ny Sampana Taninketsa anjara.
Ny 28 Martsa dia hanao fitoriana filazantsara amin’ny ankizy 5 ka hatramin’ny 12 taona ny AFF any amin’ny FOFIKRI ka arivo ariary ny fandraisana anjara.
Nentanina ny tsirairay mahakasika ny fisorohana ilay aretina Corona Virus
Nanentana ny Mpitandrina amin’ny fianarana SETELA sy FITELA.
Natolotra ho an’Andriamanitra ny zaza RATIARISON Isaia Joris Edgar sy RATIARISON Peneloppe Vall Irinah. Natao amin’ny vavaka nisaorana ny Tompo noho ny fanapahan-kevitry ny Ray aman-dreny. Nangatahina tamin’ny Tompo ny fandraisan’ny Ray aman-dreny sy ny fianakaviana ary ny fiangonana andraikitra manoloana ny fitaizana ny zaza araka ny fomba Kristiana.
Ireto avy ny hira nangatahin’ireo nanao voady sy raki-pisaorana: FFPM 545,1 / FFPM 283,5 / FF 37,3 / FFPM3,1 / FF 26,1.Toy izao avy ireo voady sy fangatahana : Fisaorana noho ny fanambinana, Fangataham-bavaka noho ny andraikitra azo ho fanompoana ny Tompo,Fangataham-bavaka ho an’ny fahasalaman’ny Raim-pianakaviana, Fisaorana noho ny tsingerin-taona sy fahafaham-panadinana
Ny hira nanolorana ny rakitra dia ny FFPM 33,3: « Tompo Andriamanitray »
Nangatahina ny Tompo mba hamerina ireo ondry nania.Nentina am-bavaka ireo tanora nahazo anjara andraikitra vaovao ao amin’ny SAMPATI. Nentina am-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy raki-boady . Notrotroina am-bavaka ireo manana hataka manokana. Nentina am-bavaka ireo sahirana, tsy salama, mana-manjo, tratry ny tsy fidiny sy tsindry hazolena. Nentina am-bavaka ny mpanompon’Andriamanitra nitory ny teny. Nentina am-bavaka ny fiangonana sy ireo mpitondra fiangonana ary mpitory teny.
Nisy ireo tompon’andraikitra Mpanazava sy Tily nanao fanekena:
ANDRIAMAHATANA Cindy – Akela Mpiandraikitra Louveteau-
RADIMIMANANA Rivo Itokiana – Filoala Milefitra Mpiandraikitra tomp-toerana-
RANDRIAFARA Miranto – Kantsy Manoa Mpiandraikitra mpanampy-
Sy fanolorana Tonia:
RANDRIANANDRASANA David –Siely Miharina Tonia Tily –
RAZARASOA Josie – Sihotsy Tabia Tonia Mpanazava –
Tao amin’ny vavaka no nisaorana ny Tompo noho ny fahatontosan’ny asa vavolombelona. Nentina am-bavaka ireo tompon’andraikitra mba hahavita an-tsakany sy an-davany ny asan’Andriamanitra.
Ny FFPM 485 « Moa Jesosy ve tsy ahy » no nohiraina mialoha ny namakiana ny tondrozotra sy nanalorana ny tsodrano ary ny FF 91 « Fa sambatra izay mitoetra » no natao taorian’izay.
Nitarika ny fotoana: Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina
Dimy minitran’ny Sekoly Alahady: Rajaofetra Chantal
Vavaka mialoha ny vakiteny: Rakotonarivo Herinirina
Vakiteny: Rakotonarivo Claudia
Nitory ny teny: Ny Misionera Joharivelo Fanambinana
Fafana : Ranaivoson Joel
Fanamafisam-peo: Rakotovololona Lova
Mpitendry orgue: Ranaivoson Jacky
Diakona tompon’anjara: Vaomieran’ny Aim-panahy sy Fifandraisana
Diakona niandry varavarana : Vaomiera Asa Vavolombelona
Naka ny sary : Rakotondramboa Andry . Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana.
Publié le 8 mars 2020 7 mai 2020
Alahady 08 Marsa 2020
ALAHADY 08 MARSA 2020 -
« Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, dia mibebaha, ka manaova ny asa voalohany; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao Aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany, raha tsy mibebaka ianao. » (Apokalypsy 2:5)
Nanomboka tamin’ny 9 ora maraina ny fotoana. Rtoa Andrianary Ony (FMKS) no nitarika raha Rtoa Ramino Vololona, no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no narahana.
Fotoana manokana koa androany noho ny maha-8 Marsa ny andro nankalazana ny maha-andron’ny vehivavy azy nitondrana am-bavaka manokana ny vehivavy niara-niombom-bavaka rehetra tao am-piangonana.
Ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy Fifandraisana no tompon’anjara androany nanaty sy nanisa rakitra ary ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona no tompon’anjara amin’ny fiandrasana varavarana.
Feon-javamaneno no nanombohan’ny fotoana. Niarahaba ny fiangonana ny mpitarika ka ny adinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky ho fiderana an’Andriamanitra dia ny tao amin’ny bokin’ny Salamo faha-100.« Mihobia ho an’i Jehovah, ry tany rehetra. Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana; Mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra; Izy no nanao antsika, ary Azy isika, Dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana, Ary eo an-kianjany amin’ny fiderana; Misaora Azy, mankalazà ny anarany, Fa tsara Jehovah; Mandrakizay ny famindram-pony, Ary mihatra amin’ny taranaka fara mandimby ny fahamarinany. »
Ny hira FFPM 233 and 1-2 no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.
Novakiana ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina avy tao amin’ny tenin’ny Soratra Masina Mat 11, 28-30 « Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako. »
ary notohizana avy hatrany tamin’ny hira FFPM 622 and 1-2,
Rehefa vita izany dia natao ny vavaka fifonana ary natao ny hira FFPM 742 and 3,
Nandray ny teny famelan-keloka ny fiangonana, izay nalaina tao amin’ny Zakaria 1, 3« Koa lazao aminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro: Miverena amiko ianareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa Aho, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. » sy Isaia 1,18« Avia ary hifandahatra isika, hoy Jehovah: Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, Dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, Dia ho tahaka ny volon’ondry fotsy. » (Isaia 1:18) ary ho setrin’izany dia natao ny hira FFPM 538 and 1-2,
Ny fanekem-pinoana laharana faharoa no niarahan’ny mpino natao, ary nitohy tamin’ny vavaka mangina izany.
I zoky Hanitra mpampianatra ao amin’ny kilasy K2 no nitondra ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora. Ny teny avy ao amin’ny Jaona 14 ; 6 no nentiny nanao ny fampianarana : « Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona tsy amin’ny alàlako »
Ny tantara nentiny natao fanehoana dia resaka fanalahidy, nampiseho maro izy teny an-tanany ary nolazainy fa iray amin’ireo ihany mahavoa ny tranony ary na dia hanandrana azy tsirairay aza izy dia tsy hisokatra mihitsy izany. Azo hoarina amin’ireo fanlahidy maro ireo ny hevitsika olombelona : tsy hoe manao asa soa maro, na hoe mandray andraikitra maro eo anivon’ny fiangonana, na koa taranaka mpanompon’Andriamanitra dia ho voavonjy. Tokana ihany ny fanalahidin’ny varavaran’ny lanitra dia ny fahasoavana izay raisina amin’ny finoana ao amin’i Jesoa Kristy.
Rehefa vita izany dia nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary natao ny hira FFPM 164 and 1, rehefa vita izany dia nisy ny vavaka.
Rtoa Andry Rakotomanana, sekreteram-piangonana no nanantanteraka izany. Ny teny avy ao amin’ny Lioka 7 : 48-50 no nentiny niatrahaba ny fiangonana : » Dia hoy Jesoa tamin-dravehivavy : Voavela ny helokao … Ny finoanao efa namonjy anao ; mandehana soa aman-tsara «
Ireto avy ary ny raharaha eto an-toerana :
Alarobia 11 martsa amin’ny 18h : Fivoriana Komity Fiara Fifankatiavana, Fivoriana Komity Toby Antambohomena samy iarahana amin’ny Mpitandrina ;
Zoma 13 martsa amin’ny 18h15 : Fandalinana ny Filazantsara araka an’I Jaona sy ny Tendry mialoha roa sosona
Sab 14 martsa manomboka amin’ny 9h : Fihofanana ho an’ny tompon’andraikitra rehetra : Birao sy Komity SSAV, Komity sy Fikambanana, Mpiandry, Mpampianatra Sekoly Alahady, … Aza adinoina ny mitondra ny Boky PV sy Bokim-bola ;
Ny Alahady 15 martsa amin’ny 8 ora maraina dia hisy fivoriana FIHEVERAN-DRAHARAHA
Entanina isika fiangonana handray ny taratasy anaovana ny RECENSEMENT; Averina hatramin’ny 31 martsa 2020.
Nandray fitenenana ny mpitandrina Raharijaona Solofoniriana ary niarahaba ny fiangonana. Nanao fanentanana maromaro ny mpitandrina toy ny :
– amin’ny Setela sy ny Fitela ihany koa izy noho ny fianarana izay efa manomboka.
– Entina am-bavaka amin’ity herinandro ity ihany koa ny fiofanan’ny tompon’andraikitra,
– Entanina ny rehetra hitondra am-bavaka ny vehivavy rehetra noho ny andro natokana ho azy ireo ny andro anio,
Atoa Ralaindimby Haja, Diakona sady biraom-piangonana no namaky ireo raki-boady. Ny teny avy ao amin’ny bokin’i Isai 41 : 1 no nentiny niarahaba ny Fiangonana,
Ireto avy ary ny hira izay nangatahin’ireo mpianakavin’ny finoana: FFPM 476/2; FFPM 3/1; FF 28/1
Ireto kosa ireo hataka manokana:
Renim-pianakaviana mangataka vavaka mba ho sitrana noho ny tsy fahasalamana
Tovolahy nahazo asa manolotra raki-pisaorana ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra
Mpianakavin’ny finona nahatratra ny andro nahaterahina koa mangataka vavaka ny amin’ny androny ho avy
Renim-pianakaviana mametraka ny asany sy fiainan-tokantranony ho eo amban’ny fahasoavan’ny Tompo hatrany
Natao hira vavaka ny FFPM 170/4 ho fanolorana ny rakitra
Natao ny hira FFPM 176/1,2,4 mialoha izany, Atoa Randrianjafitrimo Christian, Diakona no nanolotra ny perikopa ho vakiana ary nanao ny vavaka mialoha ny vatiteny. Ireto ny Perikopa izay novakiana – 2 Mpa 17 : 13-20 – Lio 13 : 1-5 – Apo 2 : 1-7. Rtoa Randrianjafitrimo Elia, Diakona no namaky nisesy ny tenin’ny Soratra Masina,
Natao ny hira FFPM 356 and 1,2,4 mialoha ny toriteny
Ity bokin’ny Apo 2 ity dia taratasy anisan’ny nosoratan’i Jaona Apostoly ho any fiangonana fito tany Azimenora tamin’ny fiandohan’ny taonjato voalohany. Taratasy natao ho famporisihina, ho fananarana ary ho fampiorenana ny mpino sy ny fiangonana
Misy teny fanalahidy telo anatin’ity taratasy ity : «Fantatro» «Kanefa»; «Mibebaha» « Fantatro ny asanao kanefa mibebaha »
1- Fantatro ny asanao
Miteny amintsika ny Tompo, miteny amin’ny vehivavy rehetra, miteny ny fiangonana manontolo ; teny fampaherezana, famporisihina ho fanomezan-danja, feno fankasitrahana, ary mampisongandina ny hery ao anatintsika.
Mampianatra antsika ny Tompo mba tsy hahazaka ny mpanao ratsy, mba hanana ny faharetana amin’ny finoana, ary mba hanana fikelezana aina amin’ny asa.
Izy io dia teny lakolosy fanairana, fampitandremana, fampieritreretana.
Misy hevitra ihany koa fonosin’io teny io :
Voafehy amin’ny fehezanteny anankiray, izay toetra nomelohan’i Jesoa Kristy dia ny : « fialàna amin’ny fitiavana voalohany, » izany hoe fampihenàna ny fifandraisanao amin’ny Kristy sy Andriamanitra.
3 – Mibebaha
Midika ihany koa hoe miverena, ho famaizana ireo mitotongana ara-panahy, ireo minia mikipy milona anaty fahotàna, fantaro fa tsy azo hanaovana fangalampiery ny Tompo,
Misy ny fanalàna azy ireny tsy ho eo amin’ny toerana misy azy eo anivon’ny fanjakan’Andriamanitra. Manomboka eto am-piangonana izany. Voalaza eto fa Kristy dia manafày , ireo izay tsy mety miverina. Aza safosafoana ny fahelemenao, sahia manonona amin’ny Tompo ny anaran’ilay helokao ka miverena sy mibebaha.
Fehiny: mihainoa izay lazain’ny fiangonana dia ho fantatrareo ny lalànareo. Amen
Nanao ny anjara hirany avy hatrany ny Sampana Taninketsa taorian’ny Toriteny,
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatontosa izany,
Nentiny nanombohana izany ny fisaorana an’Andriamanitra satria raha teny fanalahidy telo no nitondrana ny hafatra nangalàna lesona dia velombolo ny fiangonana nahare fa fantatry ny Tompo ny asany.
Nanao vavaka ho an’ny fiangonana, ireo mpitondra fiangonana rehetra, ireo mpitory filazantsara tsy an-kanavaka
Vavaka ho an’ny Kristiana rehetra eto anivon’ny fitandremana. Vavaka ho an’ireo izay mpivavaka teto Amparibe kanefa dia tsy niverina intsony, na nitsoaka an-daharana. Ho an’ny mpandray Fanasan’ny Tompo, tsy hangataka andro intsony fa hiditra Fetela, Fitela. Vavaka ho an’ny fiofanan’ny tompon’andraikitra. Vavala ho an’ny sampan’asa ho fampandrosoana ny fiangonana.
Fitondrana am-bavaka ny vehivavy rehetra mba hijeren’Andriamanitra azy ary hitsimbinany azy ireo tsy ankanavaka, hanome azy fahendrena tsara ka hijoroany ho vavolombelona Kristianina hatrany. Vavaka ho an’ireo tsy salama, ireo mana-manjo, ireo azon’ny tsy fidiny mba ho fantany fa Ianao dia eo anilan’izy ireo mandrakariva. Vavaka ho an’ireo izay manana hataka manokana. Vavaka ho an’ireo izay nanao raki-pisaorana rehetra. Izany vavaka izany dia natambatra ary nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo « Rainay izay any an-danitra ,,, » Amen
Ny asa vavolombelona notanterahina dia fiarahabana ny vehivavy rehetra noho ny andro anio 08 Martsa, andro maneran-tany natokana ho azy ireo.
Ramatoa Raharijaona Bodo vadin’ny Mpitandrina no nitarika izany ka tantaran’ny vehivavy hita taratra ao anaty Baiboly no nentiny nanomboka izany. Ny lohahevitra nalainy dia tantara hita ao anatin’ny Gazety Taratry ny Famonjena mitondra ny lohateny hoe « Vehivavy hendry sady tsara tarehy »
Nisy avy eo ny fifampitondràna am-bavaka ho an’ireo renim-pianakaviana rehetra, ireo vehivavy tanora sy ankizy ary ho famàranana izany dia ny vehivavy rehetra tsy an-kanavaka.
Rehefa vita izany dia notanterahina ny hira FF 47 «Fiadanana»
Notanterahin’ny fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 580 and 1 . Rehefa vita izany dia novakiana ny Tondrozotra 2020 ary nanolotra ny tso-drano ny Mpitandrina,
Ho an’Andriamanitra irery anie ny Voninahitra ! Amen
Mbola nisy ny asa sy fampaherezana taorian’ny fanompoam-pivavahana,
Mpitendry orga : Andriamizaka Jean Dominique
Niandraikitra ny fanamafisam-peo : Hery Lanto
Naka ny feo : Ramahery Hasina
Diakona nitaty ny rakitra : Vaomeran’ny Aim-panahy sy Fifandraisana
Nandray an-tsoratra : Ranaivoson Joël
Publié le 1 mars 2020 7 mai 2020
Alahady 01 Marsa 2020